Nigeria: Boko Xaraam oo saldhigoodii ugu waynaa laga qabsaday - BBC Somali
Nigeria: Boko Xaraam oo saldhigoodii ugu waynaa laga qabsaday
Image caption Khariidadda Nigeria oo muujinaysa halka gobolka Borno dalka kaga yaal
Madaxweyne Muhammadu Buhari, ayaa sheegay in ciidanka Nigeria ay mitidiinta Boko Xaraam ka saareen saldhigoodii waynaa ee ay ku lahaayeen kaynta Sambisa.
"Argagixisadii waa firxad meel kale oo ay u dhuuntaanna ma jirto" ayuu ku yidhi Mr Buhari warbixin uu soo saaray, waxaanu intaa ku daray in xeradan ay lahaayeen kooxda Islaamiyiinta ahi laga qabsaday [duhurnimadii] Jimcihii markii ay saacaddu ahayd 1:35 daqiiqo wakhtiga galbeedka Afrika.
Ciidanka ayaa todobaaddadii u dambeeyey guluf wayn ku hayey kayntan oo ah dhul ballaadhan oo seere uu ka dhigay gumaysigii dalka ka talin jiray, waxaanay ku taallaa woqooyiga galbeed ee gobolka Borno.
Buhari wuxu warbixintiisa ku sheegay in dedaallada lagu doonayo in lagu soo furto gabdhihii ay af-duubteen kooxdani la sii xoojin doono. Waxaanu ciidamada qalabka sida ugu hambalyeeyey hawlgalka Sambisa isla markaana guushan wuxu ku tilmaam mid "muddo dheer la sugayey oo farxad badan leh".